4 axis CNC router Machine 1325 oo leh miis Aluminium T-slot miis ah
Tilmaamaha: 1.DA1325T oo leh miis Aluminium T-slot miis waa mid ka mid ah iibinta cnc-ga caadiga ah iyo kan ugu wanaagsan, oo laga sameeyay sariiraha laba jibaaran qaloocsan oo sarreeya, tareenka Hiwin square iyo xawaaraha sare ee xawaaraha & darawalka. Waxay sameyn kartaa goynta iyo xaraashka agabyo badan, sida MDF, acrylic, alwaax, PVC, iwm. Waxaana si ballaaran loogu isticmaalaa xayeysiinta iyo warshadaha alwaaxa. 2. Iyada oo ay weheliso shirkadaha Shiinaha ee caanka ah ee matoorrada awooda leh iyo darawalada, Hiwin toosan hagida tareenka, qalabka XY axsa iyo gudbinta rck, Z axis TBI hig ...
Tilmaamaha: 1.DA1515T oo leh miis Aluminium T-slot miis waa mid ka mid ah iibinta cnc-ga caadiga ah iyo tan ugu wanaagsan, oo laga sameeyay dhumuc ballaadhan oo laba jibbaaran silsilad weyn, tareenka Hiwin square iyo xawaaraha sare ee xawaaraha & darawalka. Waxay sameyn kartaa goynta iyo xaraashka agabyo badan, sida MDF, acrylic, alwaax, PVC, iwm. Waxaana si ballaaran loogu isticmaalaa xayeysiinta iyo warshadaha alwaaxa. 2. Iyada oo ay weheliso shirkadaha Shiinaha ee caanka ah ee matoorrada awooda leh iyo darawalada, Hiwin toosan hagida tareenka, qalabka XY axsa iyo gudbinta rck, Z axis TBI hig ...
Naqshadaynta cusub ee culeyska culus ee CNC router router DA1325 miiska vacuum
Tilmaamo: 1. Moodeelkan cusub waa naqshadeynta cusub ee DA1325 CNC Router, oo laga sameeyay dhumuc laba jibbaaran oo laba jibbaaran sariir alwaax ah, tareen laba jibaaran oo la soo dejiyey iyo xawaare sare oo xawaare sare ku socda; Waxay sameyn kartaa goynta iyo xaraashka agabyo badan, sida MDF, acrylic, alwaax, PVC, iwm. Waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa xayeysiinta iyo warshadaha alwaaxa. 2. Mashiinku wuxuu ku dhajiyaa sariirta alwaax leh tuubbo bir ah oo 4mm qaro weyn leh, si saxnaanta mashiinka aan si sahal ah u gaabinaynin. 3. Iyada oo Shiinaha ay caan ku yihiin matoorrada matoorrada wadista iyo wadayaasha, ...
Tilmaamaha: 1.DA2030 / DA2040 waa cabbir weyn oo Woodworking CNC Router, oo ka sameysan tuubbo qalooc ah oo qaro weyn leh sariir jiif ah, tareen iskuxiran oo la soo dejiyey iyo xawaare sare oo isku dhafan servo motor & darawalka. Waxay sameyn kartaa goynta iyo xaraashka agabyo badan, sida MDF, acrylic, alwaax, PVC, iwm. Waxaana si ballaaran loogu isticmaalaa xayeysiinta iyo warshadaha alwaaxa. 2. Mashiinku wuxuu ku dhajiyaa sariirta alwaax leh tuubbo bir ah oo 5mm qaro weyn leh, si saxnaanta mashiinka aan si sahal ah u gaabinaynin. 3. Iyada oo Shiinaha ay caan ku yihiin ganacsiyo caan ah ...
CNC Router DA2030 / DA2040 oo leh miis T-aluminium ah
Tilmaamaha: 1.DA2030 / DA2040 waa cabbir weyn oo Woodworking CNC Router, oo ka sameysan tuubbo qaro weyn oo laba jibbaaran oo sariirta laga gooyo, tareenka labajibaaran ee la soo dejiyo iyo xawaaraha sare ee xawaaraha sare & darawalka. Waxay sameyn kartaa goynta iyo xaraashka agabyo badan, sida MDF, acrylic, alwaax, PVC, iwm. Waxaana si ballaaran loogu isticmaalaa xayeysiinta iyo warshadaha alwaaxa. 2. Mashiinku wuxuu ku dhajiyaa sariirta alwaax leh tuubbo bir ah oo 5mm qaro weyn leh, si saxnaanta mashiinka aan si sahal ah u gaabinaynin. 3. Iyada oo leh Shiinaha sumadaha sumadaha caan ku ah ...
CNC Router DA1325L oo leh miiska jikada gudaha ee golaha miiska
Tilmaamaha: 1. DA1325L oo leh koontaroolka koontoroolka gudaha sariirta mashiinka, adoo adeegsanaya meel ka yar oo ku habboon hawlgalka, oo leh qiime jaban iyo adeegsi ballaaran, saxnaan sare iyo hawl karnimo, waa mid ka mid ah iibinta cnc-ga caadiga ah iyo tan ugu wanaagsan. 2. Mashiinka leh Shiinaha caan ku caan ah matoorrada wadista gawaarida iyo darawalada, Hiwin linear hagida tareenka 20mm iyo gudbinta maraakiibta ayaa xaqiijinaya xawaaraha deg degga ah iyo saxnaanta, awoodda xamuulka weyn, wareejinta saxda ah iyo saxda, dhawaqa hoose, iyo waqtiga dheer oo shaqeynaya; 3. NC-ta mihnadeed ...
Tilmaamo: 1.DA1530 oo leh miis Aluminium T-slot miis waa mid ka mid ah iibinta cnc-ga caadiga ah iyo tan ugu wanaagsan, oo laga sameeyay sariirta qaloocsan oo laba jibaaran oo sariirta sariirta leh, tareenka Hiwin square iyo xawaaraha sare ee xawaaraha & darawalka. Waxay sameyn kartaa goynta iyo xaraashka agabyo badan, sida MDF, acrylic, alwaax, PVC, iwm. Waxaana si ballaaran loogu isticmaalaa xayeysiinta iyo warshadaha alwaaxa. 2. Iyada oo Shiinaha ay caan ku yihiin ganacsiyo caan ah oo matoorrada wadista ah iyo darawalada, Hiwin toosan hagitaan tareenka, qalabka XY ee sahaminta iyo gudbinta xargaha, Z axis TBI sare ...
DADI CNC router Machine 1325 oo leh miis Aluminium T-slot miis
Model Classic CNC Router 1325 ah oo leh Vacuum Table
Nooca Classic CNC Router DA1325 Vacuum Table
Tilmaamaha: 1.DA1625 / DA1530 Woodworking CNC Router, oo ka samaysan tuubbo qaro weyn oo laba jibbaaran oo sariirta la sudhay, tareen laba jibaaran oo la soo dejiyey iyo xawaare sare oo xawaare sare ku socda; Waxay sameyn kartaa goynta iyo xaraashka agabyo badan, sida MDF, acrylic, alwaax, PVC, iwm. Waxaana si ballaaran loogu isticmaalaa xayeysiinta iyo warshadaha alwaaxa. 2. Mashiinku wuxuu ku dhajiyaa sariirta alwaax leh tuubbo bir ah oo 4mm qaro weyn leh, si saxnaanta mashiinka aan si sahal ah u gaabinaynin. 3. Shirkadaha Shiinaha oo caan ku ah matoorrada wadista gawaarida iyo wadayaasha ...
Mashiinka CNC Router Machine oo wata Noocyo Badan
Tilmaamaha: 1. Mashiinka CNC oo leh xayeysiis fara badan waa mid ka mid ah karti sare iyo mashiinka iibinta alwaaxyada ugu wanaagsan, oo ku habboon hagaajinta ballaaran. Ikhtiyaar ah ayaa dooran kara 2-8 xawaare. 2. Leadshine servo matoorka iyo wadayaasha, iyo Y axis oo leh matoor labanlaab ah, hagida wadada tareenka ee Taiwan iyo isgaarsiinta saxda ah ee sarreeya waxay xaqiijineysaa mashiinka xawaaraha iyo saxnaanta, awooda culus ee culus, gudbinta siman iyo sax ahaanta, buuqa hoose, iyo waqtiga dheer oo shaqeynaya; 3. Mashiinka ikhtiyaariga ah ee leh nidaamka faakiyuutarka, oo la dejiyay ...